AFT: « Modus mode » ho an’ny lamaody | NewsMada
AFT: « Modus mode » ho an’ny lamaody
Tsy fahita matetika ny hetsika mahakasika ny lamaody eto amintsika. Anisan’ireo vitsivitsy hanasongadina izany ny « Modus mode », hotanterahina ny 26 hatramin’ny 29 novambra, etsy amin’ny Alliance française (AFT) etsy Andavamamba. Andiany faharoa ny amin’ity taona ity, karakarain’ny AFT sy ny Twenty Ten Totem.
Tanjon’ny “Modus mode” ny hampiroborobo ny indostrian’ny lamaody eto amintsika. Miara-dalana amin’izany ny fampahafantarana sy ny fanomezan-danja ireo sehatra asa samihafa miara-mifarimbona ao anatin’izany tontolon’ny lamaody izany. Anisan’izany, ohatra, ny famoronana, ny fanjairana, ny filatroana, ny fikarakarana volo, ny fakana sary, ny fandraisana horonantsary na “vidéo”, sns.
Andiany faharoa ny « Modus mode » amin’ity taona ity. Misy karazany maro ny fandaharam-potoana ao anatin’izany: fihaonana sy fifanakalozana eo amin’ny matihanina, ny mpianatra ary ny mpankafy lamaody. Hisy koa ny fampirantiana saripika, miompana tanteraka amin’ny fanehoana ny asa famoronana lamaody malagasy. Manampy izany ny atrikasa mikasika ny asa manodidina ny lamaody. Tsy hadinoina ny alina miavaka, ny “Soirée de gala”, ny 30 novambra, ahitana filatroana sy fanentanana samihafa.